FANKALAZANA FAHA 160 TAONA Archives - FJKM KATEDRALY ANALAKELY
FANKALAZANA FAHA 160 TAONA
160 taona (1861-2021)
Toriteny Alahady 12 Septambra 2021 – Jeremia 31 : 18 – 21
Ny alahady 08 aogositra 2021 lasa teo no notanterahina ny Alahadin’ny taranaka sy ny zanaka am-pielezana tao amin’ny FJKM Katedraly Analakely, ka nandritra ny fidirana faharoa izay nanomboka tamin’ny 10 ora maraina izany.
Araka ny fanapaha-kevitry ny komitin’ny fankalazana ny faha-160 taona, izay efa nandalo ny ambaratonga-drafitra teto amin’ny FJKM Katedraly Analakely dia ny fanavaozana tanteraka ny “Façade principale” no tsangambato iray lehibe hanamarihana izao fankalazana izao.
Fiadanana, fifaliana no hanasana anao, ary hisaorana ianao hanaparitaka ity amin’ny fianakaviana. Hotahian’ny Tompo. Komity fankalazana ny faha-160 taona
“Manangàna famantaran-dàlana ho anao ianao, manorena tsangam-bato.” Jeremia 31:21 – Fanazavana ny teny faneva fankalazana ny faha-160 taona ny fiangonana.
IREO AKORA ILAINA HANAMBOARANA AN’ANALAKELY
Lisitr’ireo akora ilaina amin’ny fanavaozana ny trano fiangonana Katedraly Analakely.
Hiatrika asa tao-trano maro ny fiangonana manomboka ny volana martsa 2021. Izany dia tafiditra ao anatin’ny tsangam-baton’ny fankalazana ny faha-160 taona ny fiangonana.
Category: FANKALAZANA FAHA 160 TAONA